Iyo Apple Watch inotanga kukwikwidza neiyo itsva Fitbit Versa | Ndinobva mac
Fitbit anoedza zvakare neye new smartwatch modhi. Mune ino kesi, iyo nyowani Fitbit Versa smartwatch ine dhizaini yakafanana neiyo Apple Watch iyo inouya ichitsika-tsika kuedza kuwana nzvimbo mumusika. kuti inogadziriswa nekoloni neiyo yekambani yeapuro yakarumwa.
Fitbit yakaratidza iyo itsva Fitbit Versa, smartwatch inotarisa pane hutano uye data rehutano. Iyo isina uremu simbi smartwatch inoratidzira epamberi hutano uye kugwinya maficha senge 24/7 moyo wekutevera kuteedzera, pa - screen kudzidzira, uye otomatiki yekurara nhanho yekutevera.
Iyo chishandiso inopawo mhinduro dzinokurumidza dzeiyo Android system, Fitbit Pay mune yakasarudzika vhezheni yeFitbit Versa, mimhanzi pane chishandiso uye anopfuura mazuva mana ehupenyu hwebhatiri. Ivo vane mutoro weFitbit nyika:
Sezvo chikamu chekupfeka chinoramba chichikura, iyo Fitbit Versa inozadzisa yakakosha musika nekupa yakashongedzwa yakagadzirirwa, yakazara-inoratidzwa smartwatch iri nyore kushandisa uye nemutengo unokwikwidza kwazvo. Iyo Versa inopa vatengi vane zvemberi zvehutano uye zvemitambo maficha, pamwe nekufara kwakawanda pamapuratifomu efoni uye ne4-mazuva bhatiri hupenyu.
Kune zvese zvatakambokurukura, tinofanirwa kuwedzera kuti Fitbit akazivisawo itsva yeWomen Health Tracker kuti ivabatsire kuteedzera kumwedzi kwavo, vatarise dhata rezvehutano munzvimbo imwechete, uye vanzwisise zvirinani kubatana kwehutano hwavo hwese. Yevakadzi yehutano yekutevera ichave ichiwanikwa pane chishandiso cheFitbit Versa uye Fitbit Ionic vashandisi pamwe nevashandisi veiyo Fitbit app senge yegore 2018.
Iyo Fitbit Versa icharova pamusika nehurongwa Fitbit OS 2.0, iyo inosanganisira itsva dashibhodhi yetsika iyo inopa yakajeka, yakajeka, uye yakazara maonero ehutano uye data rezvehutano, kusanganisira:
● Statistics muchidimbu: Wona ako ezuva nezuva uye evhiki ehutano uye akasimba manhamba, nhoroondo chiitiko, kurova kwemoyo uye kurovedza muviri pfupiso, chiito-chakatarisana chinokurudzira meseji, matipi, manomano, uye kutungamira kwezuva nezuva.
● Zvimwe zvakagadziriswa munguva: Zviyeuchidzo, mhemberero, kunyoreswa, mazano, pfupiso dzekurara, nezvinetso zvemagariro, zvichikurudzira kutora matanho zvichienderana nedata rako.
Pamusoro pezvo, hutano uye hutano hweFitbit Versa zvinosanganisira:
● Yakasarudzika gwara rekudzidzisa: moyo wekutevera KwakachenaPulse 24/7, pachedu pa-screen workouts Fitbit kochi, 6 maitiro ekurovedza muviri 15+, yakabatana GPS, yekushambira yekutevera pamwe nekushomeka kwemvura kusvika pamamita makumi mashanu, pamwe nekuzviitira otomatiki uye kuteedzera yekutevera.
● Hutano uye hutano kuongorora: inogona kushandiswa Matanho Ekurara uye Kunzwisisa kuti uone kuti takarara zvakadii kuti tigone kumisikidza inozorodza purogiramu. With Cardio Kusimba Chikamu uku uchikwanisa kuona kuti wakakwanira sei.
Iyo Fitbit Versa ichave ichiwanikwa for pre-order kutanga nhasi pa Awea.com kubudikidza $ 199.95 mune nhema ine nhema nhema aluminium kesi, grey ine sirivheri aluminium kesi, kana pichisi ine rose yegoridhe kesi yealuminium; zvishongedzo zvichatengeswa nemitengo kubva pa $ 29.95 kusvika pa $ 99.95. Iyo yakasarudzika edition yeFitbit Versa, iyo inosanganisira iyo Fitbit Pay, inowanikwa ye $ 229.95.
Tichiona zvese zvavakatarisisa mune iyi smartwatch nyowani, tichaona kuti chii chinokanganisa kutengesa kweApple Watch pamwe ne nhau kuti Apple ikozvino ichaita mune yayo watchOS kana mabhenefiti eFitbit Versa aburitswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch inotanga kukwikwidza neiyo itsva Fitbit Versa
Rescuecom inoti Macs ndiwo akavimbika pamusika